China komatsu track link assy mpanamboatra any China mpanamboatra sy mpamatsy | Jinjia
mpanamboatra rohy assy komatsu any China
Ampahany amin'ny famonoana kodiarana
Roller mitondra dozer tsara kalitao
Sprockets sy faritra ho an'ny mpitrandraka sy dozer ary ...
China track roller ho an'ny kodiarana dozer KOMATSU
Track Shoes ho an'ny Crawler Track
OEM / ODM China Bulldozer Single Flange Track Roller ...
Izahay dia manana karazan-dàlan'ny rohy maromaro izay manomboka amin'ny 88mm ka hatramin'ny 226mm, mety amin'ny karazana excavator, bulldozer, milina fambolena ary milina manokana izy ireo. Ny velarana sy mandroso amin'ny rohy, ny pin ary ny kirihitra dia namonoana diplaoma avo lenta ary manana fiainana milay mafy.
Ny faritra rehetra ato aminay dia tohanan'ny fiantohana tsara indrindra amin'ny indostria ary voasedra amin'ny fotoana any an-tsaha. Ny tanjonay dia ny hanome ny COST OPERATING FOTOTRA farany ambany isak'izay mety ho an'ny mpanjifanay.
1. rojo maina, rojo vy mihombo sy voahosotra rojo vy, rojo vy nohosorana ho an'ny fampiharana avo lenta.
2. Vita tamin'ny vy manokana natsipy sy ny hafanana faobe notsaboina ho an'ny fiainana struktural farafaharatsiny tao anatin'ny toe-javatra iasana izaitsizy.
3. Ny rojonay rehetra dia novolavolaina manokana ho amin'ny fitomboan'ny faharetan'ny pin sy ny bushings. Ny fifandeferana min / max dia ny fandeferana eo anelanelan'ny tsimatra, ny famaohana ary ny rohy dia tazomina ho azy amin'ny alàlan'ny min / max fanaovan-gazety. Ity dingana ity dia mampihena ny fahatapahan'ny rohy sy ny fihenan'ny pin / bushing. Izahay koa dia manolotra rojo mavesatra andraikitra miaraka amina kirihitr'ala mahatanty akanjo lava ho an'ny fiainana serivisy faran'izay mafy amin'ny fampiharana izay misy fery mafy.
4. Fitaovana: 35MnB na 40Mn2.
5. Fahaiza-mamokatra: 500pcs / Volana, miaraka amin'ny orinasan-tsika fanombohana hatramin'ny 2012.
6.Efa manao ny forging, ny milina ary ny hafanana amin'ny alàlan'ny tranokalanay manokana izahay, manome anay fifehezana kalitao bebe kokoa amin'ny fizotry ny famokarana rehetra amin'ny rojom-pifamoivoizana.
7. Famokarana famokarana: ny filaharana mahazatra dia ao anatin'ny 10 andro; ny baiko lehibe kokoa dia mety mitaky 15-35 andro.
8. Rohy malalaka, rohy mankany amin'ny làlan-kaleha, rohy mankany assy, ​​vondrona assy / làlan'ny làlan-kaleha, misy daholo.
Teo aloha: China track roller ho an'ny kodiarana dozer KOMATSU
Manaraka: Sprockets sy faritra ho an'ny mpitrandraka sy dozer ary crane
Excavator Track Link Asyr
kojakoja ho an'ny milina fanamboarana undercar ...
LS118 Custom Track Roller Parts mitondra 60T Fo ...